Air Vent မှအကောင်းဆုံး Air Vent မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD.'s Air Vent အများဆုံးရေခြားမြေခြားဝင်ငွေတိုးတက်များပြားလာကြီးများရာခိုင်နှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းဆက်လက်ရှိနေရန်မျှော်လင့်ပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူများ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူရှေ့တွင်လများတွင်ဆက်လက်ကြီးထွားမှု၏အပြုသဘောဆောင်သောဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးမြှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု decelerating, အနာဂတ်လမ်းလအတွင်းအထက်သို့လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ကျန်ရှိသောရောင်းအားစိတ်ချယုံကြည်ကြပေမဲ့နောက်ထပ်အမိန့်အမျိုးမျိုးဒေသများလေ့လာစူးစမ်းခြင်းငှါသူတို့ရန်သတိပေးကြသည်။
အကောင်းဆုံး Air Vent ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် Air Vent ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်
DSC အားလုံးသံမဏိ float အမျိုးအစားအမျိုးအစားလေဝင်လေထွက်မဟုတ်ဘူး.11AV ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 28K x ကို 260̊ဂ. ●pump ၏ထိပ်တွင် DSC Float အမျိုးအစားလေဝင်လေထွက်တပ်ဆင်,စုဆောင်းထားသောလေထုကိုပပျောက်စေရန်ပိုက်နှင့် tank. ●LIGHT AIR သည်လေထဲသို့ရောက်သော်ထိုင်ခုံနှင့် Valve ဖွင့်သည်,လေကိုရေထဲသို့ရွေ့လျားမှီတိုင်အောင်စဉ်ဆက်မပြတ်လေဝင်လေထွက်နိုင်ပါတယ်.FLOAT သည်ရွေ့လျားပြီးထိုင်ခုံနှင့်နီးရန်လီဗာရှိသည်,အဆို့ရှင် ●တစ်ခါလေယာဉ်ကွင်းပိတ်,FLOAT နှင့်ထိုင်ခုံအကြားတချို့ရဲ့လေယာဉ်တည်ရှိ,ရေစီးဆင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်အဆို့ရှင်. ●တံဆိပ်ခတ်ထားသောသံမဏိကိုယ်ထည်အားလုံးသည်ခွန်အားနှင့်မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ကိုအကျိုးရှိစေသည်. ●အချည်းနှီးသောယန္တရားသည်ကာလရှည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်. ●ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုအတွက်အပြည့်အ ၀ စတီယာရင်နှင့် INLET. ●အလေးချိန်ပေါ့. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.11AV